IGNOME iqinisekisa ukuba iTelegrand izakuxhasa izitikha kungekudala | Ubunlog
I-Telegrand izakuxhasa izitikha kungekudala, kunye nezinye izinto ezintsha eziza kungekudala kwi-GNOME
IPablinux | 18/09/2021 11:06 | gnome, Ubuntu
Kwaye emva kwe Inqaku leendaba leKDE, ngoku lithuba loku GNOME. Umahluko phakathi kweprojekthi enye nenye ucacile, kwaye oko kubonakala kwindlela umntu ngamnye azipapasha ngayo iindaba zakhe. Ngelixa i-KDE ipapasha amanqaku amaninzi, iqela labaphuhlisi ngasemva kweyona desktop isetyenzisiweyo kwilizwe leLinux lipapasha kancinci, kodwa yenza yonke into ibe lula njengolwazi kunye nokubanjwa kweTelegrand oya kuyo kweli nqaku.
Phakathi iindaba kuneGNOME usiqhubele phambili kule vekiEnye enxulumene neTelegram ithatha ingqalelo yam. Okokuqala, ngenxa yokuba ngumthombo ovulekileyo kunye nokuba nomthengi osemthethweni osebenza ngokugqibeleleyo kwidesktop, i-GNOME iphuhlisa eyayo ukuphucula ukudityaniswa kwayo yonke idesktop kunye nenkqubo yokusebenza; Okwesibini, ngenxa yokuba olunye lweenguqu abasibonise zona namhlanje kukuba ixhasa izitikha, into ebikhona kumthengi osemthethweni ukusukela ... andazi ukuba nini.
Yintoni entsha eza kungekudala kwi-GNOME
UFractal ngoku ulayisha imbali.
I-Telegrand iphucule kakhulu, kwaye ngoku imiyalezo ephumayo isebenzisa umbala we-aksenti, ngelixa ezo zingenayo zenziwe zangcono. Inkxaso ikongezwe kwizitikha kunye nezinye izehlo ezinxulumene nemiyalezo, njengokucima iqela okanye ifoto yejelo kwincoko.
Bakhulule i-Emblem, isixhobo esitsha sokuyila ii-avatars zeprojekthi zeGitLab. Okwangoku inokufakwa kwi Flathub. kwaye kukho ulwazi oluthe kratya kwi le posti yebhlog yeGNOME.
Yabelana ngomboniso ungene kwi-GNOME Circle.
Ukuthayipha ngoku kunamagama olwimi lwasekhaya, ke inokukhangelwa kulwimi oluthile. Ingakumbi luncedo kwiilwimi ezineleta ezinje ngeArabhu.
UDejà Dup ufumene i-tweaks encinci yoyilo, ngokuyinxenye ukuvumela iwindow ukuba iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ibe yincinci, kodwa kwakhona ukuyenza ibe ngcono kwi-GNOME.
Kwaye zezi ziindaba osebenza kuzo okanye izinto esele zenzekile kwihlabathi le-GNOME. Yazi okuncinci ukuba siyithelekisa nale nto isixelelwa yi-KDE, kodwa inyani yile yokuba le veki yeshumi kuphela yale "Veki kule GNOME". Mhlawumbi kwixa elizayo baya kukhuthazwa ukuba bandise uluhlu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » gnome » I-Telegrand izakuxhasa izitikha kungekudala, kunye nezinye izinto ezintsha eziza kungekudala kwi-GNOME
I-Linux 5.15-rc2 ilungelelanise iibugs ezininzi kunokuba bekulindelekile kwiveki yesibini yophuhliso lwayo
I-KCalc iya kukhupha imbali entsha kwaye i-KDE iyaqhubeka nesantya sayo sokuphucula iiseshoni zeWayland
Fumana amanqaku akutshanje kwi-Ubuntu, Linux kunye nesoftware yasimahla.